Bokin' ny Genesisy - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Jenezy)
Bokin' ny Genesisy na Bokin' ny Jenezy na Bokin' ny Genesý (izay hafohezina amin' ny hoe Genesisy na Jenezy na Genesý) no iantsoana ny boky voalohany ao amin' ny Baiboly. Mitantara ny famoronan' Andriamanitra izao rehetra izao sy i Adama sy i Eva, olombelona voalohany, io boky io. Mitantara ny amin' ny safodrano tamin' ny andron' i Noa izay vokatry ny fahotana mihoa-pampana nataon' ny taranak' ireo olombelona ireo ilay boky. Tantarainy koa ny amin' ny nampanjarian' Andriamanitra ny fitenin' ny olombelona ho maro tamin' ny nanamboaran' izy ireo ny Tilikambon' i Babela. Miresaka momba ireo Razamben' ny Israelita (patriarka) toa an' i Abrahama sy i Isaka sy i Jakoba ary i Josefa koa io boky io.
Ny lovantsofina hatramin' izay dia milaza fa i Mosesy na Môizy no nanoratra ny Bokin' ny Genesisy izay isan' ny Pentateoka na ny Torah ao amin' ny Baiboly jiosy (na Tanakh), nefa ny fikarohana ankehitriny mitsipaka izany.
Ny Bokin' ny Genesisy ao amin' ny Baiboly jiosy dia isan' ny Tôrah, fa ao amin' ny Baiboly kristiana kosa dia isan' ny Pentateoka. Nosoratana teo anelanelan' ny taonjato faha-7 sy faha-4 tal. J.K. ity boky ity.
2.1 Fotoana nanoratana ny Bokin' ny Genesisy
2.2 Ny loharanon'ny Bokin' ny Genesisy
3.1 Ny tantaran' ny Fiandohana
3.1.2 Ny taranak' i Adama (Gen. 5.1 - 6.8)
3.1.4 Ny taranak' i Nôa (Gen. 10.1 - 11.9)
3.2 Ny Tantaran' ireo Patriarkan' i Israely (Gen. 12-50)
3.2.1 Ny tantaran' i Tera sy i Abrahama (Gen. 11.27 - 25.11)
3.2.2 Ny tantaran' i Ismaela (Gen. 25.12 - 18)
3.2.3 Ny tantaran' i Isaka (Gen. 25.19 - 35.29)
3.2.4 Ny tantaran' i Esao (Gen. 36.1 - 43)
3.2.5 Ny tantaran' i Jakôba sy ny zananilahy Jôsefa (Gen. 37.1- 50)
Ny anarana sy fanasokajiana ny bokyHanova
Ny andian-teny hoe Bokin' ny Genesisy (ao amin' ny Baiboly prôtestanta amin' ny teny malagasy) na Bokin' ny Jenezy (ao amin' ny Baiboly katôlika amin' ny teny malagasy) dia fandikana ny andian-teny latina hoe Liber Genesis (ao amin' ny Volgata) izay nenti-nandika ny teny grika hoe βιβλίον της Γενέσεως / Biblíon tês Genéseôs (ao amin'ny Septoajinta) izay hafohezina amin' ny hoe γένεσις / génesis ("fiadohana").
Tsy izany anefa no dikan' ny anaran' io boky io amin' ny teny hebreo izay manao azy hoe ספר בראשית / Sefer Berêshît (ao amin' ny Tanakh) izany hoe "Boky Tany am-piandohana" na "Boky Tamin' ny voalohany". Ny teny voalohany ao amin' io boky io no nataon' ny Jiosy anarany, dia ny teny hoe Berêshît izay midika hoe "tamin' ny voalohany" (Gen. 1.1) na "tany am-piandohana".
Fanasokajiana ny bokyHanova
Ao amin' ny Tanakh (Baiboly hebreo) dia boky voalohany ao amin'ny sokajy voalohany atao hoe Tôrah ny Sefer Bereshit, fa ao amin' ny Baiboly kristiana kosa dia isan' ny Pentateoka ny Bokin' ny Genesisy na Jenezy.
Fanoratana ny GenesisyHanova
Tsy misy soratra na iray aza ao amin' ny Bokin' ny Genesisy izay milaza ny olona nanoratra azy. Na dia izany aza dia milaza ny lovantsofina jiosy fa i Mosesy (na Môizy) izany mpanoratra izany, izay lazaina koa fa nanoratra ireo boky efatra manaraka, ka iantsoana ny fitambaran' ireo boky ireo hoe "Boky dimin' i Mosesy" na "Boky dimin' i Môizy". Tsy manaiky izany ny mpikaroka maro ankehitriny, ka nipoitra ny patra-kevitra momba ny fanoratana ny Pentateoka manontolo, ka ny fantatra indrindra amin'izany dia ny petra-kevitra ara-tahirin-kevitra.
Fotoana nanoratana ny Bokin' ny GenesisyHanova
Ny Genesisy na Jenezy dia isan' ny Pentateoka izay fanangonan-dahatsoratra nataon' ny mpanoratra jiosy manodidina ny vanimpotoan' ny fahababoana tany Babilôna (taona 588 hatramin' ny taona 538 tal. J.K.) sy taorian'izany.
Hatramin' ny faramparan' ireo taona 1990 sy nandritra ireo taona 2000 dia naroson' ny mpikaroka ny fiheverana fa ny votoatin' ny lahatsoratry ny Pentateoka dia azo antoka fa nangonina tamin' ny vanimpotoana persiana, izany hoe teo anelanelan' ny taonjato faha-5 sy faha-4 tal. J.K. na raha aloha indrindra dia teo anelanelan' ny taonjato faha-7 sy faha-6 tal. J.K..
Ny loharanon'ny Bokin' ny GenesisyHanova
Ny petra-kevitra ara-tahirin-kevitra izay novolavolain' i Karl Heinrich Graf (1815-1869) sy Julius Wellhausen (18844-1918) tamin' ny taonjato faha-19 dia mitsipaka ny fandraisana ara-bakiteny ny fitenenanana hoe "Boky dimin' i Mosesy" na "Boky dimin' i Môizy".
Io petra-kevitra io dia mahita loharano efatra ao amin' ny Pentateoka, dia ny loharano iahvista (hafohezina amin' ny hoe J) sy ny loharano elôhista (hafohezina amin' ny hoe E) sy ny loharano deoterônômista (hafohezina amin' ny hoe D) ary ny loharanon' ny mpisorona (hafohezina amin' ny hoe P) ka ny Bokin' ny Genesisy dia vokatry ny fanambarana indrindra ampahan-dahatsoratra avy amin' ny loharano telo, dia ny J sy ny E ary ny P . Tamin' ny taona 1960 dia izao ny vokatra ankapobeny azo tamin' io petra-kevitra io:
J 930 (vanimpotoan’ iSôlômôna) Gen. 2.4 – Jôsoa 24 Gen.12.1-3. Eks 19.3 sy snm. Fanamarinana ny fanjakan' i Davida; manatanteraka ny fampanantenany sady miaraka amin' ny olona Andriamanitra (Iahveh).
P 550 Gen. 1 – Deo. 34 /Jôsoa Gen .1, Gen. 17, Eks.6 Fiandrianana sy fahamasinan' i Iahveh; lanjan' ny andrim-pivavahana; fanelanelanan' ny mpisorona.
Mizara roa lehibe ny tantara ao amin' ny Genesisy, dia ny Tantaran' ny Fiandohana sy ny Tantaran'ireo Razamben' i Israely (na Tantaran' ny Patriarka).
Ny tantaran' ny FiandohanaHanova
Ny Tantaran' ny Fiandohana dia ny tantara voalaza amin'ny toko iraika ambin' ny folo voalohany ao amin' ny Genesisy (Gen. 1-11). Izany dia mahakasika ireo fotoana voalohany nisian' izao tontolo izao.
Mizara dimy izany tantara izany, ka ny fanombohan'ny tsirairay amin' ny fizarany ao amin' ny Tanakh (Baiboly hebreo) dia ahitana ny teny hoe Toledot.
Ny famoronana ny lanitra sy ny tany (Gen. 1.1 - 4.26)Hanova
ny namoronan' Andriamanitra izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy;
ny nametrahany ny olombelona voalohany (i Adama sy i Eva) tao amin' ny Saha Edena sy ny nandroahana azy ireo tsy ho eo anatrehan' Andriamanitra noho ny fahotany;
ny vonoana olona voalohany: novonoin' i Kaina zanaka lahy voalohan' i Adama sy i Eva ny rahalahiny atao hoe Abela.
Ny taranak' i Adama (Gen. 5.1 - 6.8)Hanova
ny taranak' i Kaina sy ny zava-bitan' izy ireo teo amin'ny fampandrosoana ny tananany;
ny taranak' i Seta izay nipoiran' i Nôa sy i Abrahama;
ireo zanak' Andriamanitra nanambady ny zanakavavin' ny olombelona sy ireo Nefilima taranany izay niteraka fahotana maro.
I Noa sy ny safodrano (Gen. 6 - 9.28)Hanova
ny antony nahatonga ny safodrano, ny fampiomanana an' i Nôa hanamboatra sambofiara;
ny tantaran' ny fandripahana tamin' ny alalan'ny safodrano;
ny fanekena teo amin' Andriamanitra sy i Nôa (na Nôe) ny amin' ny tsy handringanana intsony ny olona amin' ny safodrano, ny famantarana izany dia ny avana;
ny amin' i Nôa sy ny ankohonany, ny nahitana voalohay ny divay, ny ozona nahazo an' i Kanaana.
Ny taranak' i Nôa (Gen. 10.1 - 11.9)Hanova
ireo firenena taranak' i Nôa, ny nampielezan' Andriamanitra azy ireo eran' izao tontolo izao taorian' ny nanamboaran' izy ireo ny Tilikambon' i Babela.
Ny taranak'i Sema (11.10 - 26)Hanova
ny taranak' i Nôa avy eo amin' i Sema hatramin' i Tera rain' i Abrahama.
Ny Tantaran' ireo Patriarkan' i Israely (Gen. 12-50)Hanova
Ny Tantaran' ireo Patriarkan' i Israely dia ny tantaran' ny fotoana niainan' ireo Razambe (na Patriarka) telo dia i Abrahama, i Isaka ary i Jakoba. Izany tantara izany dia hita ao amin' ny Genesisy toko faha-12 hatramin' ny faha-50.
Ny tantaran' i Tera sy i Abrahama (Gen. 11.27 - 25.11)Hanova
Zanak' i Nahora taranak' i Sema i Tera. Izy no rain' i Abrahama sy i Nahora II sy i Haràna ary i Saraha (izay ho lasa vadin' i Abrahama). I Ora any Kaldea no tanàna fiaviany.
Nanompo andriamanitra maro izy ireo. Nofidin' Andriamanitra i Abrahama taty aoriana ka noho ny haben' ny finoany no nilazan' Andriamanitra aminy fa hanan-taranaka maro sady nampanantenainy tany mahavokatra ho an' ireo taranany ireo izy, dia ny tany Kanaana. Nanambady an' i Saraha sy i Ketora izy sady niteraka tamin' i Hagara, araka ny Baiboly.
Ny tantaran' i Ismaela (Gen. 25.12 - 18)Hanova
I Ismaela no zanak' i Abrahama voalohany raha mbola tsy niteraka an' i Isaka i Saraha. I Hagara, vehivavy Egiptiana mpanompovavin' i Saraha, no reniny. Taty aoriana dia teraka i Isaka. Tamin' ny farany i Abrahama dia nandroaka an' i Hagara sy ny zanany hiala avy eo aminy araka ny sitrapon' i Saraha izay tsy te-hizara ny lovan-janany amin' i Ismaela.
Ny tantaran' i Isaka (Gen. 25.19 - 35.29)Hanova
Zanak' i Abrahama sy i Saraha sady rahalahy tsy iray reny amin' i Ismaela i Isaka. Nanambady an' i Rebeka izy ka niteraka an' i Esao sy i Jakôba. Nanohy ny fivavahan-drainy amin' Andriamanitra tokana izy sady nampita izany tamin' ireo zanany koa, indrindra tamin' i Jakoba. Niampita taminy ny tsodrano azon' i Abrahama sy ny fampanantenan' Andriamanitra ny tany Kanaana ho an' ny taranany koa izy.
Ny tantaran' i Esao (Gen. 36.1 - 43)Hanova
Zanak' i Isaka sy i Rebeka i Esao (na Edôma) sady kambana tamin' i Jakôba. Tian-drainy kokoa izy nefa tsy azony ny tsodranon-drainy tokony ho azy noho ny hafetsen' i Jakôba rahalahiny. Tamin' ny fahalehibeazany dia nifindra fonenana izy sy ny ankohonany mbamin' ny biby fiompiny. Namela heloka an' i Jakôba ihany i Esao tamin' ny farany. Araka ny Baiboly dia izy no razamben' ny Edômita.
Ny tantaran' i Jakôba sy ny zananilahy Jôsefa (Gen. 37.1- 50)Hanova
Zanak' i Isaka sy i Rebeka i Jakôba. Antsoina hoe Israely izy taorian' ny fitolomany tamin' ny "anjelin' Andriamanitra" ka ny taranany dia atao hoe Israelita na Zanak' i Israely. Nanompo an'Andriamanitra tokana izy ka nandova ny fampanantenana natao tamin' ireo razany dia ny hanana taranaka maro homena tany mahavokatra, dia ny Tany Kanaana. Nanambady efatra izy ka niteraka an' ireo zanilahy nipoiran' ny foko roa ambin' ny folo. I Jakôba sy i Rahely niteraka an' i Jôsefa sy i Benjamina. Namidin' ireo rahalahiny izay nialona azy ho andevo izy nefa lasa manam-pahefana tany Egipta taty aoriana. Nantsoiny honina any Egipta ireo fianakaviany tamin' ny fotoana nahamosarena ny tany. Taorian' ny nahafatesan' i Jôsefa sy ilay Farao natoky azy dia niharan' ny fanandevozana ireo taranak' i Jakôba alohan' ny hiverenan' izy ireo any Kanaana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27_ny_Genesisy&oldid=1041783"
Dernière modification le 18 Desambra 2021, à 18:48
Voaova farany tamin'ny 18 Desambra 2021 amin'ny 18:48 ity pejy ity.